Otu Priyanka Chopra si zere ime akwa uwe - Ozi
Agba Style Nke Nrụgide Idozi Ozugbo Ngwọta Homelọ Nyocha Nyocha Ibu Ibu Techaa Akpụkpọ Anụ Ahụike Mma Agbamakwụkwọ
Priyanka Chopra ji mbanye anataghị ikike iji zere nrụrụ mkpuchi akwa na Grammys
Ọ bụghị ihe nzuzo na arụ ọrụ wodrobu na-eme mgbe ụfọdụ, ọ bụ ya mere Priyanka Chopra gbakwunyere nchebe ọzọ (n'ụzọ nkịtị) n'oge Grammy Awards.
Na Quantico alum, 37, na nso nso a gara ememe nke 62nd na di ya, Nick Jonas. Chopra yi uwe mgbokwasị mara mma na-acha ọcha site na Ralph & Russo , nke gosipụtara olu ya nke na-adaba n'okpuru eriri afọ ya.
Mgbe na-atụle uwe na N'ajụjụ ọnụ Anyị kwa izu , onye na-eme ihe nkiri gosipụtara na e mere ya kpọmkwem iji guzogide ihe ọghọm ọ bụla na kapeeti uhie.
Ralph & Russo O kwuru, sị, mgbe ọ bụla ha meere m akwa ma ọ bụ meere m ihe ndị ọzọ, ha na-eme ha dabara adaba na ahụ m.
Ihe nzuzo a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhụ anya n'ime akwa ahụ. Nke ahụ na-akọwa etu Chopra nwere ike imegharị aka ya wee hulata n’enweghị ụjọ maka ụmụ agbọghọ ahụ ịda. * Ughkwara, Janet Jackson, ụkwara *
Yabụ dị ka ndị mmadụ nwere ike iche na ọ ga-esi ike ijikwa, ha hụrụ tulle a dị egwu otu agba dị ka ụda akpụkpọ ahụ m na ụdị ejiri uwe ahụ, o kwukwara. Yabụ, ị nweghị ike ịhụ ya na eserese mana ọ nweghị ụzọ ọ ga - esi mee ma ọ bụrụ na ha enweghị nke ahụ. Ọ dị ka ụgbụ.
Chopra gosipụtara na nkasi obi bụ ihe achọrọ mgbe ị na-ahọrọ akwa kapeeti uhie. Anaghị m ahapụ ma ọ bụrụ na m nwere oke nchekwa, ọ kọwara. Enweghị m mmasị na nrụrụ wodrobu! Ọ dịghị onye na-eme!
Anyị na-ezu ohi echiche uwe a na-adịghị ahụ anya.
Njikọ: Rami Malek Zọpụtara Forbọchị Maka Rachel Brosnahan Mgbe Onye Na-arụ Ọrụ Wodrobu
Categories Ejiji Agbamakwụkwọ Ntutu Isi Mma Agbamakwụkwọ
ọgwụgwọ kachasị mma maka ntutu ntutu
ngwa ngwa na mfe snacks
galọn mmiri otu ụbọchị
ihe eji eme ihe maka ntutu isi
akwụkwọ 10 kacha gbaa ume
top 10 ihunanya Hollywood fim 2016